Ku saabsan adeegsiga xarumaha | Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ota Ward
Ku saabsan adeegsiga tas-hiilaad dhaqameed xaalad degdeg ah awgeed
Xaaladda degdegga ah ayaa la kordhiyay si looga hortago faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus ee Tokyo.
Sidaas darteed, awoodda iyo saacadaha isticmaalka xarunta ayaa sii ahaan doona sida soo socota.
Waxaan jeclaan lahayn inaan weydiisano dhammaan isticmaaleyaasha fahamkooda iyo wadashaqeyntooda ku aaddan ka hortagga faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus.
XNUMX. XNUMX.Xarunta Bartilmaameedka, Muddada, iwm.　* Cusboonaysiinta 9/10
Luulyo XNUMX, sannadka XNUMXaad ee Reiwa-Khamiis, XNUMXka Sebtember, sannadka XNUMXaad ee Reiwa
* Muddadu way is beddeli kartaa iyadoo ku xiran heerka faafitaanka cudurka mustaqbalka.
Xarumaha gaabiya saacadaha furitaanka
Xarunta ayaa xirnaan doonta XNUMX:XNUMX. Fadlan xarunta ka tag XNUMX:XNUMX.
Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa waqtiga isticmaalka xarun kasta / qol kasta.
Waqtiga isticmaalka ugu dambeeya
Hoolka weyn, hoolka yar, qolka bandhiga, qolka shirarka, qolka japan-ka ah, qolka shaaha, qolka farshaxanka, qolka jimicsiga, jimicsi Ilaa 20:00 (ka tag 20:00)
Istuudiyaha muusiga / teniska miiska Kala soocida ilaa 19:00
Kubadda teniska Kala soocida ilaa 19:30
Qolka tababarka Ilaa 19:45 (ka tag 20:00)
* Fadlan laxiriir xarun kasta markaad isticmaaleyso hoolalka waaweyn iyo kuwa yaryar iyo qolalka bandhig ujeedada munaasabadaha (madadaalo, iwm).
Hool weyn / hool yar / qol bandhig Ilaa 20:00 (ka tag 20:00)
istuudiyaha Kala soocida ilaa 19:00
Hoolka, geeska bandhigga, aqoon isweydaarsiga hal abuurka ah (qolka wax lagu kariyo, qolka farshaxanka, qolka farsamada), qolka japan-ka ah, qolka shirarka, qolka sugitaanka, qolka isku celinta, boos furan, istudiyaha isboortiga XNUMXaad Ilaa 20:00 (ka tag 20:00)
Istuudiyaha muusiga, istudiyaha isboortiga XNUMXaad (maxkamada squash) Kala soocida ilaa 19:00
Xarunta warfaafinta Ilaa 19:00
* Fadlan laxiriir xarun walba markaad u adeegsaneyso hoolka ama qolka ujeedada badan ujeedada munaasabad (madadaalo, iwm).
Lacag celinta xarunta
Inta lagu jiro mudada, iyada oo aan loo eegin nooca isticmaalka, haddii aad joojiso isticmaalka xarunta si looga hortago faafidda cudurrada faafa, waxaan soo celin doonnaa qaddarka buuxa.Fadlan la xiriir xarun kasta wixii faahfaahin ah.
Fadlan la xiriir xarun kasta wixii khidmad ah ee adeegsiga ee adeegsiga ah sababo la xiriira xaddidaadda isticmaalka habeenkii.
XNUMX.Xaddidaadda tirada isticmaaleyaasha
XNUMX% gudahood awoodda qol kasta.
XNUMX. XNUMX.Tallaabooyinka ka hortagga infekshanka aasaasiga ah
Hubi in masaafada u dhexeysa ay habboon tahay.
XNUMX.Xaddidaadda iyo codsiyada iyadoo kuxiran ujeedada adeegsiga
Marka laga hadlayo ujeedooyinka soo socda ee isticmaalka, isticmaalka waa la xaddidayaa ama la joojinayaa waqtiga.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan qorsheyneynaa inaan go'aansanno inaan ka qaadno xayiraadda iyadoo ku saleysan xaaladda mustaqbalka sida horumarka Roadmap-ka.
A) Cunid iyo cabitaan / diyaafad
Mabda 'ahaan, in wax la cuno ama wax lagu cabo gudaha dhismaha waa mamnuuc.Si kastaba ha noqotee, fuuq-baxa si looga hortago istaroogga kuleylka dhibaato maahan.
Isticmaalka "xafladaha" qolka waa la joojinayaa waqtigaan maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay ku adag tahay ganacsiyada bixiya cuntada iyo cabitaanka inay si fiican u fuliyaan tallaabooyinka ka hortagga cudurka.
Waa caadi in qado lagu dhex cuno qolka (oo ay ku jiraan jikada Ota Bunkanomori, marka laga reebo qolka cunnada iyo cabitaanka laga mamnuucay), laakiin fadlan ka taxaddar qodobadan soo socda.
Fadlan u fariiso qaab aan waji-ka-waji ahayn.
Fadlan sug masaafada habboon ee u dhexaysa isticmaalayaasha.
Fadlan ka fogow wadaagga boodhadhka iyo taarikada dadka isticmaala.
Fadlan ka fogow sheekooyinka dheer inta lagu jiro cuntada.
B) Isticmaal u baahan fiiro gaar ah
Markaad u adeegsanayso ujeedooyinka soo socda, fadlan fiiro gaar ah u yeelo badbaadinta masaafada dadka dhexdooda ah.
Mahjong, Tag, Shogi
Dhaqanka muusikada (muusikada qalabka)
Dhaqanka muusikada (muusikada codka)
Heesta Shigin / folk
Ciyaaraha kale (hula dance)
Ciyaaraha cayaaraha (aerobic, jazz dance, iwm)
Fadlan iska ilaali wadahadalka fool-ka-foolka ah iyo wada-hadalka masaafada gaaban ah intii suurtagal ah.
Farahaaga jeermiska ugu daa kulan kasta.
Si joogto ah jeermiga ugu nadiifi qalabka (jajabyada, dhagxaanta gogosha, looxyada, doolshooyinka mahjong, ulo, iwm).
Dhaqanka muusikada-yoga iwm
Haddii aad ku neefsaneyso jimicsi dartiis, ka fogow masaafo dheeri ah.
Fadlan ka taxaddar inaad ka fogaato xiriir xad dhaaf ah oo u dhexeeya dadka isticmaala.
Ka fogow cod-ka-waji cod iyo hees.
Fadlan ka waantow isticmaalka haddii aad ku sugan tahay xaalad jireed oo liidata sida qandho ama qufac.
Fadlan ku hayso awoodda qolka (XNUMX% gudahood awoodda)
Fadlan meel fog ka fogee dadka isticmaala.
Fadlan naga caawi sidii aad u dhaqi lahayd gacmahaaga marka aad soo galayso ama aad ka baxaysid, oo aan si fiican u dhaqan galino aadaabta qufaca.
Fadlan xiro maaskaro.Fadlan ka fogow galitaanka madxafka haddii aadan xidhnayn (fadlan weydii shaqaalaha)
Cunista iyo cabitaanka gudaha dhismaha mabda 'ahaan mabnuuc (marka laga reebo qoyaanku si looga hortago istaroogga kuleylka)
Hawada si joogto ah u isticmaal inta aad isticmaaleyso xarunta (qiyaastii 10 daqiiqo saacaddii)
Fadlan ka waantow inaad ku isticmaasho muddo dheer meel la wadaago (lobb iwm)
Fadlan qashinkaaga u kaxee guriga
Haddii aad isku aragto infekshan cusub ee coronavirus 2 toddobaad gudahood isticmaalkiisa ka dib, fadlan ku soo wargeli maamulaha xarunta aad isticmaalayso isla markiiba.
Wixii faahfaahin ah, fadlan eeg dukumiinti kasta.
Codsiyada adeegsadayaasha xarunta
XNUMX.Ku saabsan furitaanka hoolka xusuusta　* Cusboonaysiinta 7/9
Hool kasta oo xusuus ah ayaa dib loo furay XNUMX-dii Juun (Talaado) wuxuuna sii socon doonaa furitaankiisii ​​sidii caadada u ahayd.
Hoolka Xusuusta Ryuko, Kumagai Tsuneko Hall Hall, Sanno Kusado Memorial Hall
XNUMX.Ku saabsan ganacsiga ay kafaala qaadayso ururka　* Cusboonaysiinta 7/9
Markii aan hirgelinay mashruuca, waxaan qaadnay tallaabooyin lagama maarmaan u ah aragtida kahortagga faafitaanka cudurka cusub ee cudurka coronavirus.Faahfaahinta, fadlan eeg bogga waxqabadka waxqabad kasta.
Waxaan idinka raali galineynaa cillad kasta oo idin soo wajahda waana ku mahadsantihiin fahamkiina iyo wada shaqeyntiina